Sudan oo Doorasho ka Bilaabatay
Doorashooyin guud ayaa ka bilowday maanta dalka Suudaan iyadoo la filayo in dadka codaynaya ay dooran doonaan Madaxweynaha talada haya Cumar Xasan Al-Bashiir iyo xisbigiisa National Congress Party kadib markii ay qaadaceen doorashooyinka axsaabta mucaaradka.
Mr Bashir oo ay raadinayso maxkamadda caalamiga ah ee ICC, waxa uu talada hayey tan iyo snanadkii 1989-kii waxaana uu ku guulaystay doorasho dhacday 2010-kii oo mucaaradku sheegteen in lagu shubtay.
Dadka ayaa kala dooranaya madaxweynaha yo musharrxiiin aan sidaasi loo aqoon, waxaana codbixintu socon doontaa ilaa Arbacada.
Midowga Yurub, Maraykanka, Biritan iyo Norway dhammaantood waxay cambaareeyeen doorashada, waxayna ku andacoonayaan inaanay jirin wadatashi qaran oo suurtogeliya hannaan siyaasadeed oo lagu wada jiro.
Madaxa Siyaasadda Midowga Yurub Federica Mogherini, ayaa sheegtay in doorashada aysan ka soo bixi karin natiijyo lagu kalsoonaan karo oo waddanka oo dhan sharci ka ah.
Madaxa Guddiga Doorashada ee Suudaan Professor Mukhtar Al-Assam, ayaa ku gacan sayray eedahaas isaga oo VOA u sheegay in mucaaradku ay ka mid yihiin baarlamaanka doortay guddiga, codbxintuna ay noqonayso mid si caddaalad ah ku dhacda.